ISaddleback View Cottage, Indawo yaseUllswater
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguLiz
Imeko kwimihlaba efanayo neSaddleback Penthouse ekwafumaneka ku-Airbnb. Eli litye limnandi livaliweyo lakhiwe cottage lalungiswa ngokupheleleyo, landiswa kwaye laxhotyiswa ngokupheleleyo kumgangatho ophezulu kakhulu. Le ndlu yangasese inamagumbi amabini okulala, aneebhedi ezinkulu zenkosi kunye namagumbi okuhlambela amabini, kwaye iqinisekile ukuba ibhenela izibini ezimbini okanye iintsapho ezincinci ezifuna indawo yokuhlala ephezulu kwindawo enoxolo. Yeyona ndawo ifanelekileyo yekhefu lempelaveki okanye ukuhlala iiveki uphonononge iSithili seLake. .
Ipropathi ine-oyile yokufudumeza esembindini, kunye nokufudumeza ngaphantsi kumgangatho osezantsi kunye neeradiyetha phezulu kwaye kubandakanya:
Indawo yokuhlala enesicwangciso esivulekileyo esinegumbi lokuphumla elikhethiweyo kunye nekhitshi / indawo yokutyela.
Indawo yokuphumla: Ngesitshisi somthi, iTV yescreen esicaba, iDVD, iCD/irediyo, iingcango zepatio kunye neefestile ezinkulu zemifanekiso ezineembono ezithandekayo kwiSaddleback.
Ikhitshi / isidlo sangokuhlwa: Inesipheko sombane esinezitovu zegesi, ifriji/ifriji yaseMelika, iwasha/idryer, umatshini wokuhlamba izitya, imicrowave kunye netafile yokutyela nezitulo.
Igumbi lokulala 1: Inebhedi enkulu elingana nenkosi enokwahlulwa ibe ziibhedi ezingatshatanga (nceda ingcebiso xa ubhukisha) kunye neshawari yeen-suite, iWC kunye nesitya sokuhlambela.
Igumbi lokulala eli-2: Igumbi lokulala elinobukhulu obukhulu kunye nebhafu ye-en-suite, i-cubicle yeshawa, iWC kunye nesitya sokuhlambela.
Ngasemva kweCottage inepatio yabucala egqibeleleyo ngexesha leenyanga zasehlotyeni ukuze uthathe ithuba loncedo lweBBQ.
4.95 ·Izimvo eziyi-39
Ime imayile enye ukusuka kwilali yaseCalthwaite, enendawo yokusela ethengisa ukutya kwebha, phakathi kwePenrith neCarlisle. Imizuzu eli-10 ngemoto ukusuka kwisiphambuka esingu-41 ku-M6 kunye nemizuzu engama-20 ukusuka e-Ullswater, eCaldbeck Fells, eCarlisle nase-Eden Valley. Kukho ivenkile yokutya ye-MS ekwiimayile ezintathu kude kwisikhululo senkonzo, kunye noluhlu oluninzi lweevenkile kuzo zombini iCarlisle kunye nePenrith, le yeyona ndawo ifanelekileyo yokuphumla apho unokundwendwela iSithili seLake.
Sifuna ukuba iindwendwe zive ukuba i-cottage yeyazo - ngoko ke asibaphazamisi abantu konke - ngaphandle kwaso nakuphi na ukulungiswa okungxamisekileyo. Silapha ukuba ufuna ukubuza nayiphi na imibuzo okanye ufuna uncedo, kodwa ukuba akunjalo, yonwabele iholide yakho ungaphazanyiswa!
Sifuna ukuba iindwendwe zive ukuba i-cottage yeyazo - ngoko ke asibaphazamisi abantu konke - ngaphandle kwaso nakuphi na ukulungiswa okungxamisekileyo. Silapha ukuba ufuna ukubuza…
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-R4095
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Calthwaite